Sony Xperia Touch သည်စျေးကွက်ထဲသို့ရောက်ရှိနိုင်သော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည် Gadget သတင်း
Ruben gallardo | | ကစားသမားများ
၎င်းသည် Android ကိုအခြေခံသောပထမဆုံး Sony စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအမျိုးမျိုးကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည် Sony Xperia Touch ၎င်းသည်သင်ဖန်တီးထားသောရုပ်ပုံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကတည်းကလပေါင်းများစွာခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ယခု ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ ဘတ်ဂျက်အားလုံးနှင့်မသင့်တော်ပါ.
ပထမ ဦး ဆုံးအရာကဒီတီထွင်မှုကသင့်ကိုဘာတွေပေးနိုင်သလဲဆိုတာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရဖို့ပါ။ Sony Xperia Touch သည်မည်သည့်ပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆို touch interface ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ဤအချက်သည်သင့်အားအသိပေးအကြောင်းများ၊ ရာသီဥတုနှင့်အိမ်၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအပြန်အလှန်ပြက္ခဒိန်ရှိရန်သင့်အားအကြောင်းကြားရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ၎င်းတင်ဆက်မှုသည်ဂိမ်းကစားခြင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အခါအများဆုံးအာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများမှာ - မိသားစု console တစ်ခုလုံးဖြစ်လာပြီးထိုအပန်းဖြေမှုအချိန်ကိုမိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒီ ၂၃ လက်မမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။
သို့သော်ထိုထက်မကရှိနေသေးသည်။ ဤ Sony Xperia Touch သည်သင်၏ရုပ်ရှင်ရုံစင်တာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နံရံနှင့်ချိန်ညှိထားသောဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပုံဖော်နိုင်သည် 80 လက်မမျက်နှာပြင်။ ဒီ Sony Xperia Touch ဟာ Android အောက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကဘာလဲ။ ဒါက သင်၏အကြောင်းအရာစာရင်းသွင်းခြင်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် streaming များ HBO သို့မဟုတ် Netflix လို.
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဂျပန်သည်ရောင်းချသောစမတ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ယင်း၏အာရုံခံကိရိယာသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏တည်ရှိမှုကိုသိရှိနိုင်သည် သတင်းအချက်အလက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပရောဂျက်လုပ်ဖို့။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Bluetooth သို့မဟုတ် NFC ဆက်သွယ်မှုများကြောင့်သင်အပြင်ဘက် element များကိုအမြဲသုံးနိုင်သည်။ HDMI သို့မဟုတ် USB-C ဆက်သွယ်မှုများကိုလည်းကေဘယ်လ်ကြိုးများမှတဆင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါကမေ့သွားမည်မဟုတ်ပါ။
ယခုသင်ဤတီထွင်မှုကိုကြိုက်လျှင်သတိထားပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စျေးနှုန်းသည်အိတ်ဆောင်အားလုံး၏မိတ်ဆွေမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Sony ၏ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းစတိုးအရသိရသည် Xperia Touch သည်ယူရို ၁,၄၉၉.၉၉ အထိရနိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » ကစားသမားများ » Sony Xperia Touch သည်စျေးကွက်အတွင်းသို့ကျဆင်းသွားသော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်